Lalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo any Dubai sy UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fanorisorenana ara-nofo: lalàna Dubai sy UAE
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanorisorenana ara-nofo any Dubai sy UAE ary ny lalàna mifandraika amin'izy ireo.
Inona no atao hoe fanorisorenana ara-nofo?
Ny fanorisorenana ara-pananahana dia faritana amin'ny fiheverana tsy ilaina sy tsy angatahina manery ny olona iray momba ny maha-lahy na maha-vavy azy. Tafiditra ao anatin'izany ny firosoana ara-nofo tsy tiana, ny fangatahana firaisana ara-nofo, ary ny fihetsika am-bava na ara-batana hafa izay mahatonga ilay niharam-boina hahatsapa ho tsy mahazo aina sy voahitsakitsaka.
Karazana na endrika fanorisorenana ara-nofo
Ny fanorisorenana ara-pananahana dia teny elonga mirakitra ny endrika fiheverana tsy tiana rehetra momba ny maha-lahy na maha-vavy ny olona iray. Izy io dia mandrakotra ny lafiny ara-batana, am-bava ary tsy am-bava amin'ny fiheverana tsy tiana toy izany ary mety misy amin'ireto endrika manaraka ireto:
Ny mpanenjika dia manao ny firaisana ara-nofo ho fepetra hampiasana, hampiroboroboana, na hanomezana valisoa olona iray, na mazava na an-kolaka.
Fanafihana ara-nofo ilay niharam-boina.
Fangatahana firaisana ara-nofo amin'ilay niharam-boina.
Manao fanambarana fanorisorenana ara-nofo, ao anatin'izany ny vazivazy mivaivay momba ny firaisana ara-nofo na ny fironan'ny olona iray.
Fanombohana na fihazonana fifandraisana ara-batana amin'ilay niharam-boina tsy araka ny tokony ho izy.
Ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy tiana amin'ilay niharam-boina.
Ny fanaovana resadresaka tsy mendrika momba ny firaisana ara-nofo, na tantara, na nofinofy any amin'ny toerana tsy mendrika toy ny asa, ny sekoly, ary ny hafa.
Mampihatra fanerena amin'ny olona iray hanao firaisana ara-nofo aminy
Fihetseham-po tsy mendrika, na ny mpanenjika na ny niharam-boina
Mandefa sary, mailaka, na hafatra an-tsoratra amin'ny olona niharan'ny firaisana ara-nofo tsy ilaina sy tsy nangatahana.
Inona no maha samy hafa ny fanorisorenana ara-nofo sy ny herisetra ara-nofo?
Misy fahasamihafana lehibe roa eo amin'ny fanorisorenana ara-nofo sy ny fanorisorenana ara-nofo.
Ny fanorisorenana ara-pananahana dia teny midadasika izay mandrakotra ireo endrika tsy tiana rehetra momba ny fandaharam-potoana. Mifanohitra amin'izany kosa, ny herisetra ara-nofo dia mamaritra izay fifandraisana ara-batana, ara-nofo na fitondran-tena izay iainan'ny olona iray tsy misy fanekena.
Matetika ny fanorisorenana ara-nofo dia manitsakitsaka ny lalàna sivily ao Emirà Arabo Mitambatra (manana zo hanao ny asany ny olona iray tsy hatahotra ny fanorisorenana avy amin'ny faritra rehetra). Mifanohitra amin'izany, ny herisetra ara-nofo dia mandika lalàna momba ny heloka bevava ary raisina ho toy ny heloka bevava.
Ny fanafihana ara-nofo dia mitranga amin'ny fomba manaraka:
Fidirana tsy mifanaraka amin'ny vatan'ilay niharam-boina, antsoina koa hoe fanolanana.
Miezaka ny hanao fidirana tsy mifanaraka amin'ilay niharam-boina.
Fanerena olona hanao firaisana ara-nofo, ohatra, firaisana am-bava sy firaisana ara-nofo hafa.
Firaisana ara-nofo tsy ilaina na inona na inona, ohatra, fifohazana
Inona no tokony hataoko rehefa mahita fanorisorenana ara-nofo?
Amin'ny maha-vavolombelon'ny fizotry ny fanorisorenana ara-nofo dia azonao atao ireto manaraka ireto:
Mijoroa amin'ny mpanenjika: raha azonao antoka fa ny fijoroana amin'ny mpanenjika dia tsy hampidi-doza anao ary mety hampitsahatra ny fihetsika tsy mendrika, azafady mba ataovy izany. Na izany aza, tsy maintsy matoky tanteraka ianao fa ny fandraisana ilay mpanenjika dia tsy hampitombo ny toe-javatra ary tsy hametraka anao sy ilay olona sahiran-tsaina na sorisory amin'ny toerana tsy azo itokisana.
Mahatonga fanelingelenana: raha tsapanao fa mety tsy mety amin'ny toe-javatra ny fomba fiasa mivantana, dia azonao atao ny mampitsahatra ny zava-mitranga amin'ny alàlan'ny fanelingelenana sy mampifantoka ny saina amin'ny tenanao fa tsy ilay olona no sahiran-tsaina sy enjehina. Azonao atao izany amin'ny fametrahana fanontaniana, fanombohana resadresaka tsy misy ifandraisany, na fitadiavana antony hanalana ilay olona voaratra na enjehina amin'ny tontolo iainana.
Mangataha olon-kafa hiditra an-tsehatra: azonao atao ny mampahafantatra ny mpanara-maso iray, ny mpiara-miasa iray hafa, na ny olona iray manana ny asany amin'ny fiatrehana toe-javatra toy izany.
Manome soroka hianteherana: raha tsy afaka miditra an-tsehatra ianao mandritra ny fanorisorenana, dia mbola afaka manohana ilay niharam-boina ianao amin'ny fanekena ny fahoriany, ny fiaraha-miory aminy ary ny fanomezana ny fanohanana ilainy.
Raketo an-tsoratra ny zava-nitranga: manampy anao hitadidy tsara ny fanorisorenana izany ary manome porofo raha manapa-kevitra ny hametraka fitarainana any amin'ireo manampahefana voakasik'izany ilay niharam-boina.
Lalàna UAE momba ny fanorisorenana ara-nofo
Ny lalàna Emirà Arabo Mitambatra momba ny fanorisorenana ara-nofo dia hita ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana: Lalàna Federaly laharana faha-3 tamin'ny taona 1987. Ny andininy faha-358 sy faha-359 amin'ity lalàna ity dia manazava ny famaritana ny lalàna momba ny lalàna. fanorisorenana ara-nofo sy ny sazy mihatra.
Taloha, UAE sy Dubai dia nihevitra ny “fanolanana ara-nofo” ho heloka bevava atao amin'ny vehivavy ary nisy lalàna nandrafetana araka izany. Na izany aza, vao haingana no nitarina ilay teny mba hampidirana lehilahy ho niharam-boina, ary fanovana vao haingana momba ny lalàna mitaratra io toerana vaovao io (Lalàna laharana faha-15 taona 2020). Mitovy amin’izany àry ny fitondrana ny lehilahy sy vehivavy niharan’ny fanorisorenana ara-nofo.
Ny fanitsiana dia nanitatra ny famaritana ara-dalàna ny fanorisorenana ara-nofo mba hampidirana hetsika, teny na famantarana miverimberina. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny hetsika natao hanentanana ny mpandray hamaly ny filan'ny firaisana ara-nofo na ny an'ny olon-kafa. Fanampin'izany, nampiditra sazy henjana kokoa ho an'ny fanorisorenana ara-nofo ny fanitsiana.
Sazy sy sazy noho ny fanorisorenana ara-nofo
Ny andininy faha-358 sy 359 ao amin'ny Lalàna Federaly laharana faha-3 amin'ny 1987 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana Emira Arabo Mitambatra dia mamaritra ny sazy sy ny sazy ho an'ny fanorisorenana ara-nofo.
Ny andininy faha-358 dia milaza izao manaraka izao:
Raha misy olona manao ampahibemaso na ampahibemaso manao fihetsika mahamenatra na tsy mendrika, dia higadra enim-bolana farafahakeliny.
Raha misy olona manao fihetsika tsy mendrika na mahamenatra amin'ny tovovavy latsaky ny 15 taona, na ampahibemaso na manokana, dia higadra herintaona farafahakeliny.
Ny andininy faha-359 dia milaza izao manaraka izao:
Raha misy olona manala baraka vehivavy ampahibemaso amin'ny teny na amin'ny asa, dia higadra tsy mihoatra ny roa taona izy ireo ary handoa onitra 10,000 dirham fara-fahakeliny.
Raha misaron-doha amin’ny fitafian-behivavy ny lehilahy ka miditra amin’ny toerana malalaka natokana ho an’ny vehivavy, dia higadra tsy mihoatra ny roa taona izy ireo ary handoa lamandy 10,000 dirham. Ankoatra izany, raha manao heloka bevava ilay lehilahy nefa mitafy vehivavy, dia heverina ho toe-javatra mampahory izany.
Na izany aza, ireo lalàna nasiam-panitsiana izao dia milaza izao sazy manaraka izao ho an'ny fanorisorenana ara-nofo:
Na iza na iza mametaveta vehivavy ampahibemaso na amin'ny teny na amin'ny fihetsika dia migadra roa taona farafahabetsany sy lamandy 100,000 dirham, na koa. Ity fepetra ity koa dia mirakitra ny catcalling sy ny sioka amboadia.
Izay rehetra mamporisika na mamporisika hanao fahavetavetana na fijangajangana dia heverina ho nanao heloka bevava, ary hatramin’ny enim-bolana an-tranomaizina sy lamandy 100,000 dirham, na iray hafa, ny sazy.
Na iza na iza manao antso avo, mihira, mikiakiaka, na manao kabary maloto na vetaveta dia heverina ho nanao heloka bevava ihany koa. Ny sazy dia sazy an-tranomaizina fara-tampony iray volana sy lamandy 100,000 dirham, na koa.
Inona ny zoko?
Amin'ny maha-olom-pirenena an'i Dubai sy UAE dia manana ireto zo manaraka ireto ianao:
Ny zo hiasa sy hiaina ao anatin'ny tontolo azo antoka sy tsy misy fanorisorenana ara-nofo
Ny zo hahalala ny lalàna sy ny politika momba ny fanorisorenana ara-nofo
Ny zo hiresaka sy hiteny manohitra ny fanorisorenana ara-nofo
Ny zo hitatitra ny fanorisorenana any amin'ny manampahefana voakasik'izany
Ny zo hijoro ho vavolombelona na handray anjara amin'ny fanadihadiana
Fomba fametrahana fitarainana
Raha niharan'ny fanorisorenana ara-nofo ianao na ny olon-tianao dia araho ireto dingana manaraka ireto mba hametrahana fitarainana:
Mifandraisa amin'ny fanorisorenana ara-nofo mpisolo vava ao Dubai
Miaraka amin'ny mpisolovava anao, mandehana any amin'ny biraon'ny polisy akaiky indrindra ary mitaraina momba ny fanorisorenana. Raha tsy mahazo aina ianao mandeha any a biraon'ny polisy hanao tatitra ny fanorisorenana, azonao atao ny miantso ny polisy Dubai hotline 24 ora raha mitatitra tranganà fanararaotana ara-nofo amin'ny 042661228.
Ataovy azo antoka ny manome tatitra marina momba ny zava-nitranga sy ny antsipirian'ilay mpanenjika.
Mandehana miaraka amin'ny porofo rehetra azonao hanohanana ny fitarainanao
Rehefa vita ny fisoratana anarana ny fitarainana, ny biraon'ny fampanoavana dia hanomboka ny fanadihadiana momba ny raharaha.
Ny mpampanoa lalàna dia hamolavola tatitra momba ny heloka bevava momba ny olana ary avy eo dia handefa ny antontan-taratasy any amin'ny fitsarana heloka bevava hahazoana didim-pitsarana
Raharaha fanorisorenana ara-nofo azonay karakaraina ao amin'ny orinasanay lalàna
ao amin'ny dalàna, afaka miatrika ny karazana fanorisorenana ara-nofo rehetra izahay, ao anatin'izany:
Tontolo fiasana feno fankahalana
Fangatahana firaisana ara-nofo tsy tiana
Ny firaisana ara-nofo amin'ny toeram-piasana
Fanomezana fanomezana ara-nofo any am-piasana
Fanenjehana ara-nofo ataon'ny mpanara-maso
Fanerena ara-nofo any am-piasana
Fanararaotana ara-nofo tsy an'asa
Fanenjehana ara-pananahana pelaka sy lesbiana
Fanenjehana ara-nofo amin'ny hetsika ivelan'ny toerana
Mandehana any amin'ny toeram-piasana
Firaisana ara-nofo amin'ny heloka bevava
Fanararaotana ara-nofo amin'ny mpiara-miasa
Fifandraisana ara-batana tsy ilaina
Fanenjehana ara-nofo amin'ny fety fialan-tsasatra any amin'ny birao
Fanararaotana ara-nofo ataon'ny tale jeneralin'ny orinasa
Fanenjehana ara-nofo ataon'ny mpitantana iray
Fanenjehana ara-nofo ataon’ny tompony
Fanararaotana ara-nofo an-tserasera
Fanafihana ara-nofo amin'ny indostrian'ny lamaody
Pôrnôgrafia sy sary manafintohina any am-piasana
Ahoana no ahafahan'ny Mpisolovava misahana ny fanorisorenana ara-nofo manampy ny raharahanao?
Ny mpisolovava momba ny fanorisorenana ara-nofo dia manampy ny raharahanao amin'ny fiantohana fa mandroso araka izay azo atao ny zava-drehetra. Miantoka izy ireo fa tsy ho tototry ny antsipirian'ny fametrahana fitarainana sy ny fitadiavam-bahaolana amin'ilay antoko nanenjika anao izy ireo. Fanampin'izany, manampy amin'ny fiantohana ny fametrahanao ny fitakianao ao anatin'ny fe-potoana araka ny tokony ho izy voatendrin'ny lalàna mba hahazoanao rariny amin'ny fahavoazanao.